Todobaad kasta, macaamiisha ka adduunka oo dhan u yimaadeen inay booqdaan Shiinaha Red Flag qabriga maryo, Ukraine, Turkey, Russia, Moldova, Romania, Masar, India, Indonesia, Vietnam, Brazil, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Venezuela, Mauritius iwm By beerta booqo Shiinaha Red fL ...
Success qabriga maryo International Exhibition cadaalad ah
Recently sano bar, Shiinaha Qingdao Tianyi Group Red Flag mishiinada dharka horeba ka qayb Turkey Istanbul, Indonesia Djakarta, Pakistan Karachi, Masar Cairo, Bangladesh Dacca, Hindiya Ahmedabad iyo bandhig Surat International qabriga maryo. Buuxin saaxiibo badan oo gaboobay oo macaamiisha badan oo cusub. Si aad u hesho in ay k ...
Masar macaamiisha weyn, hore u soo iibsan wax ka badan hal boqol oo jet hawada yari. Thanks for rumaysan iyo taageero. Markan, 24 weelasha 40-foot mar kale ku raran yihiin. Operation iyo dayactirka fudud, hufan sare iyo tamar kaydsiga: Dhamaan yari yihiin mashiinka, hawada farsamo misgaha-in caadadiisu-dhigay. Faa'iidada Best waa th ...
Ka dib markii xafladda Shiinaha sanadka cusub, tababar xirfadeed ugu horeysay. Dhammaan shaqaalaha waa in la tababaro oo kaliya baaro heerka caadiga ah ka heli kartaa shaqo caadi ah. From shaqaalaha shirka horteeda-line si ay adeegga ka dib markii shaqaalaha, oo ay ku jiraan iibka marketing, shaqaalaha dhaqaale, oo nin jeeg tayada iyo wixii la mid ah. W ...
The ITMA Asia + CITME 2016 lagu qabtay Shanghai, Shiinaha ka 21 ilaa 25 October ee Convention Center Exhibition Qaranka iyo. Qingdao Tianyi Group Red Flag qabriga maryo Makiinado CO., LTD wadahadal farsamo leh in ka badan 1,000 martida shantii maalmood ee Shanghai bandhig. Inta badan th ...